Batanidza Detox: Tsvaga Backlinks ari Kuuraya yako SEO | Martech Zone
Batanidza Detox: Tsvaga Backlinks ari Kuuraya yako SEO
Chipiri, Kurume 5, 2013 Douglas Karr
Kudzoka kumashure kunoenderera kuve mutambo une ngozi kwazvo. Iyo yaimbove nzira yakapusa yekuvaka chinzvimbo chako online zvino inogona kuita kuti yako saiti ivigwe. Iye zvino zvave zvakakosha kuti iwe disvow zvinongedzo izvo zviri kuuraya yako yekutsvaga chinzvimbo - pinda Batanidza Detox, chikamu chemhuri yezvigadzirwa mu LinkResearchTools.
Batanidza Detox chishandiso chakamira-chega chinosarudzira backlinks yedomeini muzvikamu zvitatu (zvine chepfu, zvinokatyamadza, kana zvine hutano) uye zvinokutsigira mukuchenesa yako link yefaira. Iyo interface yeLink Detox iri nyore kubata, unogona kuwana ese akashata mawebhusaiti kune yako saiti nekudzvanya kamwe chete. Batanidza Detox inoongorora yako yekubatanidza profile inoenderana nemhando dzakasiyana dzeSEO metric uye inozivikanwa mamiriro ane matambudziko. Ivo vanobva vapa kurudziro kune izvo zvine chepfu zvinongedzo.
Unogona nyorera kune Link Detox uye ita 1 detox pamwedzi ye $ 40.
Tags: backlinkingBacklinksbacklinks dzakaipazvisungo zvakaipabatanidza detoxlinkrekuchina
Mashandisiro Ekushandisa SMS Kukunda Rudo, Zvinotungamira, Revenue
Shure kweiyo Facebook Senge Bhatani
Zvakaita sekunge iwe waiziva kuti ndaiita izvi manheru ano. Wakachenesa ese backlinks asi kune iyo peji resaiti saiti nekuchinja ma URL uye kwete 301ing iwo - hombe PITA. Zvinotora mwedzi asi ndosaka ndichiwana yero grey ngowani.
Tichafanirwa kusaisa pasi peji rekumba
Iyo iri nyore nzira shamwari. Ingo pinda mukati kuLinkResearchTools uye nevamwe vese ivo vanozozviitira otomatiki. Ndakaverenga chinyorwa chine chekuita Sei kudzivirira Penguin nemaoko enzira. http://www.technologyace.com/internet-marketing/seo/recover-blogwebsite-google-latest-penguin-2-0-update/
Nov 27, 2013 pa6: 42AM
Pandakashandisa Link Research uye Link Detox ndakaodzwa mwoyo nebasa uye mhedzisiro. Kwete zvakawanda zvakaitika, uye ini handina kupihwa rubatsiro rwakanyanya panguva yandaida. Ndakafunga kushandisa Iyo Link ma Auditor kuti ndigadzirise backlinks yangu mushure mekuona yakanaka kwazvo kuongororwa pane akasiyana maforamu. Basa ravo rakanga riri nani zvikuru! Ivo vane timu inogara iripo kukubatsira iwe nemibvunzo kana kuraira. Ndichishandisa maturusi eThe Link Auditors, ndakakwanisa kuwana zvese zvinongedzo zvine chepfu, ndikazvibvisa zvese zvizere. Jason, nhengo yechikwata yandakataura naye, akabatsira kwazvo parutsigiro rwefoni. Aiteerera kumatambudziko angu uye akatsanangura chaizvo zvakaipa. Paakangoita izvi akandiudza kuti ndeapi maturusi aigona kundishandira.
Ndichishandisa maturusi eThe Link Auditors, ndakawana ruzivo rwakadzama, ndaigona kuona kuti ndeapi maratidziro aindikuvadza uye ndaiziva kuti ndeapi maratidziro aida kubviswa. Kushandisa chishandiso chavo chekubvisa chaive nyore kwazvo sezvo chichigadzirisa otomatiki uye nekukurumidza zvakanyanya. Ini ndashandisa akasiyana akasiyana ekubvisa maturusi anga achiwanikwa paInternet, uye yavo yaive yakanakisa!
Nov 28, 2013 pa4: 31AM
Ini ndaishandisa Iyo Link ma Auditor futi. Vakandibatsira zvakanyanya nekuongorora kwangu, vachindipa rutsigiro pandaida uye nekunditsanangurira dambudziko rangu. Ndatenda nekutumira izvi sezvo ndichifunga kuti vanhu vazhinji vanofanirwa kuziva nezvavo. Basa ravanopa rinongova rakanaka, rakavimbika uye riri nyore kuita.